Ikpuchido Nzuzo ahia: Gini ka I Kwesịrị Knowmara? | Law & More B.V.
blog » Ikpuchido Nzuzo ahia: Gini ka I Kwesịrị Knowmara?
Ikpuchido Nzuzo ahia: Gini ka I Kwesịrị Knowmara?
Azụmaahịa Nzuzo Azụmaahịa (Wbb) etinyere na Netherlands kemgbe 2018. Iwu a na-etinye Ntuziaka European na nkwekọ nke iwu na nchekwa nke usoro esi amatabeghị na azụmahịa. Ebumnuche nke iwebata ntuziaka European bụ iji gbochie nkewa iwu na ndị otu niile wee si n'aka ha mepụta nkwenye iwu kwadoro maka ọchụnta ego. Tupu oge ahụ, enweghị ụkpụrụ a kapịrị ọnụ na Netherlands iji kpuchido etu esi amata ihe ọmụma na azụmaahịa yana azịza ya ka a ga-achọ na iwu nkwekọrịta, ma ọ bụ karịa karịa na nzuzo na ngalaba asọmpi. N'ọnọdụ ụfọdụ, ozizi ịta ahụhụ ma ọ bụ ụzọ iwu nke mpụ na-enyekwa ihe ngwọta. Site na itinye ikike nke Iwu Nzuzo Azụmaahịa, gị dịka onye ọchụnta ego ga-enwe ikike iwu iji malite usoro iwu mgbe enwetara, gosipụtara ma ọ bụ jiri iwu nzuzo gị. Kedu ihe pụtara na nzuzo nzuzo na mgbe yana ihe ndị ị ga - eme iji mebie nzuzo nzuzo azụmaahịa gị, ị nwere ike ịgụ n'okpuru.
Kedu ihe nzuzo nzuzo?
nzuzo. N'ihi nkọwa ya na edemede nke 1 nke Iwu Nzuzo Azụmaahịa, ekwesighi ịmara ozi azụmahịa ma ọ bụ nweta ya n'ụzọ dị mfe. Ọbụnadị ndị ọkachamara na-ejikarị ụdị ozi a eme ihe.
Uru ahia. Na mgbakwunye, Iwu Nzuzo Azụmaahịa kwuru na ozi azụmaahịa ga-enwerịrị uru azụmaahịa n'ihi na ọ bụ ihe nzuzo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, inweta ya n'ụzọ na-akwadoghị, iji ya ma ọ bụ igosipụta ya nwere ike bụrụ ihe na-emebi azụmahịa, azụmaahịa ma ọ bụ atụmatụ dị iche iche ma ọ bụ ọnọdụ asọmpi nke ọchụnta ego nke nwere iwu ahụ.
Ezi uche. N'ikpeazụ, ozi gbasara azụmahịa ga-agbaso usoro ziri ezi iji mee ka ọ bụrụ ihe nzuzo. N'ebe a, ị nwere ike iche maka, dịka ọmụmaatụ, nchekwa dijitalụ nke ozi ụlọ ọrụ gị site na okwuntughe, izo ya ezo ma ọ bụ ngwanrọ nche. Usoro ndị ezi uche dị na ha gụnyere okwu nzuzo na nke abụghị asọmpi na ọrụ, nkwekọrịta nkwekọrịta yana usoro ọrụ. N'echiche a, usoro a nke ichebe ozi azụmaahịa ga-anọgide na-adị mkpa. Law & MoreNdị ọka iwu bụ ndị ọkachamara na nkwekọrịta na iwu ụlọ ọrụ ma nwee obi ụtọ inyere gị aka idepụta ma ọ bụ nyochaa nkwekọrịta nzuzo gị na nkebi edemede na-abụghị asọmpi.
Nkọwa nke ihe nzuzo azụmaahịa akọwapụtara n'elu bụ nke sara mbara. N'izugbe, nzuzo nzuzo ga-abụ ozi enwere ike iji nweta ego. N'okwu doro anya, ụdị ihe ọmụma ndị a nwere ike ịtụle n'ọnọdụ a: usoro mmepụta, usoro na usoro nri, mana ọbụlagodi echiche, data nyocha na faịlụ ndị ahịa.
Kedu mgbe enwere ịda iwu?
Ozi azụmahịa gị ọ na-ezute ihe atọ achọrọ maka nkọwapụta iwu na Nkeji edemede 1 nke Iwu Nzuzo Azụmaahịa? Wee chekwaa ozi ụlọ ọrụ gị na akpaghị aka dịka ihe nzuzo ahia. Enweghị (n'ihu) ngwa ma ọ bụ ndebanye aha maka nke a. N'okwu ahụ, ịnweta, iji ma ọ bụ ime ka ọha na eze na-enweghị ikike, yana mmepụta, inye ma ọ bụ ire ahịa nke ịda iwu megidere iwu ndị ọzọ, adabaghị n'iwu, dị ka Nkeji edemede 2 nke Iwu Nzuzo Azụmaahịa si dị. Abịa n’ihe metụtara iji nzuzo eme ihe n’ụzọ na-akwadoghị, nke a nwekwara ike ịgụnye, dịka ọmụmaatụ, mmebi nke nkwekọrịta na-anaghị ekpughe ihe metụtara nke a ma ọ bụ iwu (nkwekọrịta) iji belata ojiji nke nzuzo ahịa. Na mberede, Iwu Nzuzo Azụmaahịa na-enyekwa ndị ọzọ Nkeji edemede 3 maka nnweta, ojiji ma ọ bụ nkwuputa iwu na-akwadoghị yana mmepụta, inye ma ọ bụ ire ahịa nke ịda iwu. Dịka ọmụmaatụ, anabataghị nnweta ahia iwu na-akwadoghị dị ka nnweta site na nchọpụta onwe ya ma ọ bụ site na 'injinịa azụ', ya bụ, nchọpụta, nyocha, ịwasị ma ọ bụ nnwale nke ngwaahịa ma ọ bụ ihe enyerela aka Enwetara ọha na eze ma ọ bụ na iwu.
Jikoro megide ahia nzuzo
Iwu Nzuzo Azụmaahịa na-enye ndị ọchụnta ego nhọrọ ịme ihe megide ịda iwu nzuzo nzuzo ha. Otu n'ime ohere, nke akọwara na Nkeji edemede 5 nke Iwu ahụ edepụtara, metụtara arịrịọ maka onye ọka ikpe enyemaka nke mbụ ka ọ were usoro nchekwa na nchekwa. Oge ezumike ahụ metụtara nchegbu, dịka ọmụmaatụ, mmachi na a) iji ma ọ bụ igosipụta nke nzuzo ahịa ma ọ bụ b) iji mepụta, nye, tinye n'ahịa ma ọ bụ jiri ngwaahịa na-emebi, ma ọ bụ jiri ngwaahịa ndị ahụ maka ebumnuche ndị ahụ. ịbanye, mbupụ ma ọ bụ chekwaa. Usoro mgbochi n'aka nke ọzọ gụnyere njide ma ọ bụ nkwupụta nke ngwongwo a na-enyo enyo na ọ na-emebi.
Ohere ọzọ dịịrị onye ọchụnta ego, dị ka Nkeji edemede 6 nke Iwu Nchedo Nzuzo Azụmaahịa, dị na arịrịọ maka ụlọ ikpe nke ikike iji nye iwu ịma jijiji na usoro mmezi. Nke a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, icheta ngwaahịa na-ada iwu site na ahịa, mmebi nke ngwongwo nwere ma ọ bụ itinye ihe nzuzo azụmaahịa na nloghachi nke ndị na-ebu data a nye onye ji ihe nzuzo azụmaahịa ahụ. Ọzọkwa, onye ọchụnta ego ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ n'aka onye na-emebi iwu dabere na Nkeji edemede 8 nke Iwu Nchedo Ala. Otu ihe a metụtara nkwenye nke onye mebiri iwu ahụ na ụgwọ iwu dabara adaba na ụgwọ ndị ọzọ nke ndị ọchụnta ego kpatara dị ka ndị otu, ma site na Nkeji edemede 1019ie DCCP.
Nzuzo ahia bu ihe di nkpa nye ndi oru ahia. You chọrọ ịma ma ụfọdụ ụlọ ọrụ ozi nke gị ahia nzuzo? Ì meela ihe nchebe zuru ezu? Ma ọ bụ ugbua ị na-eme ihe banyere ngabiga nzuzo nzuzo azụmahịa gị? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Na Law & More anyị ghọtara na ịda iwu nke nzuzo azụmaahịa gị nwere ike ibute nsonaazụ gị na ụlọ ọrụ gị, yana achọrọ ihe zuru oke ma tupu ma emesịa. Ọ bụ ya mere ndị ọka iwu nke Law & More jiri usoro nkeonwe ma doo anya. Gị na ha, ha na-enyocha ọnọdụ ahụ ma na-eme atụmatụ usoro ọzọ a ga-eme. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ndị ọka iwu anyị, ndị ọkachamara na ngalaba ụlọ ọrụ na usoro iwu, na-enwekwa obi ụtọ inyere gị aka na usoro ọ bụla.
Previous Post Nkwado mba ụwa
Next Post Idegharị iwu NV na oke nwoke / nwanyị